बच्चालाई यस्तो पोषण – जनस्वास्थ्य खबर
बच्चालाई यस्तो पोषण
रूपा के.सी (नर्स)
घरमा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा छन् ? उसलाई के खुवाउने गर्नुभएको छ ? बच्चाको उमेरअनुसार फरक–फरक आहार आवश्यक पर्छ । पोषणमा तल–माथि भएमा अत्यधिक मोटो तथा कुपोषणको सिकार हुने खतरा रहन्छ । बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासमै असर पुग्छ । त्यसैले कुन उमेर र समयमा बच्चालाई कस्तो खाना खुवाउने भन्ने विचार पुर्याउनुपर्छ ।
६ महिना पूरा भएपछि बच्चालाई आमाको दूध मात्रै पर्याप्त हुँदैन । आमाको दूध पेट भरिने गरी आए पनि आमाको दूधमा आवश्यक पोषणको कमी हुन सक्छ । तर, आमाको दूध चुसाउन छोड्नु भने हुँदैन । आमाको दूध निरन्तर खुवाउनुका साथै लिटो, पोसिलो जाउलो, खिचडी खुवाउनुपर्छ । हरेक दिन एकपटक मौसमअनुसारको फलफूल खुवाउनुपर्छ । दिनमा कम्तीमा तीनपटक स्तनपान गराउने र तीन पटक खाना खुवाउनुपर्छ ।
वर्षदिन पूरा भएका बच्चालाई पोषण बढाउनुपर्छ । एकदेखि दुई वर्ष उमेरका बच्चालाई आमाको दूधका साथै नियमित खाना खुवाउनुपर्छ । खानामा गेडागुडी, कुखुराको अन्डा, सागपात मिचेर खुवाउनुपर्छ । लिटो, जाउलो, खिचडी, चिउरा, रोटी, भटमास, गेडागुडी मिसाएको पोषिलो खाना पनि खुवाउनुपर्छ । खाना तथा खाजामा घिउ, तेल आदिको मिश्रण गरी थप पोषिलो बनाउन सकिन्छ । नियमित स्तनपानका अतिरिक्त तीन पटक खानाका साथै दिनमा दुई पटक खाजा खान दिनुपर्छ ।
बच्चाको पोषण स्थिति थाहा पाउन जन्मेदेखि २३ महिनासम्म प्रत्येक महिना तौल जाँच गर्नुपर्छ । दुई वर्ष देखि ३५ महिनासम्मका बच्चालाई प्रत्येक दुई महिनामा एकपटक तौल लिनुपर्छ । ३५ महिना देखि ५९ महिनासम्मको बच्चालाई भने प्रत्येक चार महिनामा एक पटक तौल लिँदा हुन्छ । यसका साथै पाखुराको नाप पनि लिने गर्नुपर्छ । यो अवधिमा तोकिएका खोप तथा भिटामिन नियमित लगाउने तथा खुवाउने गर्नुपर्छ ।
( केसी जिल्ला अस्पताल, रसुवा मा कार्यरत छन्)
काठमाण्डाै, १७ असोज । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल ले MN/BNS/BMS को अावेदन खुल्ला गरेको छ। प्रतिष्ठानमा MN/BNS/BMS पढ्नको लागि प्रवेश परिक्षा दिन चाहानेले फाराम असोज २१ गते देखि कार्तिक २० गते सम्म भर्न सक्ने छन्। अावेदकले फाराम अनलाइन बाट फारम भर्नु पर्ने छ र दरखास्त दस्तुर इ सेवा बाट भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। थप जनाकारी को लागि प्रतिष्ठानको वेब साइट www.nams.org.np मा हेर्न सकिने छ।
BNS/BMS को पुरा सुचना हेर्नुहोस्
MN को पुरा सुचना हेर्नुहोस्
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी,एमएस, एमपीएच र नर्सिङ पढ्ने अवसर